हरेक युगल जोडीले थाहा पाउनुहोस सफलता चाहानु हुन्छ भने यो तरिका बाट यौनसम्पर्क गर्नुहोस - Eall Nepal
हरेक युगल जोडीले थाहा पाउनुहोस सफलता चाहानु हुन्छ भने यो तरिका बाट यौनसम्पर्क गर्नुहोस
तपाई सोचिरहनु भएको होला यो कसरी हुन्छ ? आउनुहोस आज हामी सेक्ससँग जोडिएका केही राजका बारेमा जानकारी दिन्छौं । जब तपाई सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईको मन खुश हुन्छ । र अफिसमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ । जव अफिसमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ तब तपाईको बोस खुशी हुन्छन् र प्रमोशन गरिनदिन्छन् । यो हामीले भनेको होइन, एक अध्ययनले यस्तो भन्छ । के तपाईलाई थाहा छ सेक्स सफलताको राज ?
जान्नुहोस यसबारेमा सबै कुराः
पछिल्लो पटक जर्मनीको इन्स्टिट्यूट फर द स्टडी फर लेबर और इकोनमिक रिसर्च सेन्टरले गरेको एक अध्ययनका अनुसार, जुन मानिसले नियमित सेक्स गर्छ उन तुलनात्मक रुपमा नगर्ने भन्दा खुशी रहन्छ । उ खुशी त रहन्छ साथै आफ्नो व्यवसायिक जीवनलाई पनि परफेक्ट राख्छ । अध्ययनमा बताइए अनुसार जुन मानिसल सेक्स गर्दैनन् वा नियमित रुपमा सेक्स गर्दैनन् उनीहरुले एक्लोपन, डिप्रेसन र तनाव जस्ता समस्याबाट पीडित हुन्छन् र भित्रभित्रै एक खालको छटपटाहाट हुन्छ ।
साथै अध्ययनले यो पनि भनेको छ कि जुन व्यक्तिले दैनिक सेक्स गछर्न उनीहरुले नगर्नेको तुलनामा ४.५ प्रतिशत बढि तलब पाउँछन् । जागिरमा कयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ कि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ तर उसको प्रमोशन हुँदैन । यदि तपाई नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ भने तपाईको प्रमोशन पनि छिट्टै हुन सक्छ ।
वास्तवमा दैनिक सेक्स गर्नाले तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ र तपाईको मन पनि खुशी हुनेछ । साथै तपाई आफ्नो नियमित काम पनि बडो राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ । यानी कि राम्रो सेक्सले आत्मविश्वास बढाउँछ र यसको सकरात्मक असर तपाईको दैनिक जीवनका साथै प्रोफेसनल लाइफमा पनि पर्ने अध्ययनले दावी गरेको छ ।
तपाईलाई सित्तैमा यौनसम्पर्क गर्ने मन छ भने यी ५ देशको भ्रमण गर्नुहोस ! कुरा गर्नुहोस फरक नै पर्दैन
के लेखिएको छ त तपाईको आजको राशीफलमा : ज्योतिषले भन्छ राशी अनुसार यस्ता काम भुलेर पनि नगर्नुहोस